Gbasara Anyị - Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd.
Forsetra Roof Tile Co., Ltd. E hiwere na 2017, na-elekwasị anya na imepụta akwa ụlọ achara na paịlị, asphalt shingles na PVC / ALUMINUM gutter mmiri. Anyị na-ewetakwa nnukwu-zinc nke ihe nchara maka ụlọ nchara dị nchara. Na usoro usoro ụlọ a niile dị mkpa, anyị na-ebu ụzọ enye ndị ahịa anyị ọrụ otu nzụ ahịa.
Anyị nwere usoro mmepụta abụọ dị elu maka akwa taịlị nke ma otu agba na agba ndị nwere agba, jikọtara ya na ngwa mma, dịka akwa nkata, ndagwurugwu ndagwurugwu, mpempe ụlọ dị larịị wdg. Ọzọkwa, anyị nwere atụmatụ isii niile a ma ama nke profaịlụ ụlọ tile elu na agba dị iche iche maka ndị ahịa ịhọrọ, iji mezuo ihe ndị ahịa niile chọrọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-anakwere nhazi nke akụkụ ahaziri iche maka ndị ahịa ndị chọrọ ụdị pụrụ iche nke ụlọ ahụ ma ọ bụ ihe nlele dị iche.
Forsetra Roof Tile Co.Ltd abụghị naanị ilekwasị anya na imepụta taịlị, kamakwa ọ na-emepụta ngwaahịa sistemụ mmiri mmiri PVC / ALUMINUM, iji nye ndị ahịa ngwaahịa ịkwụ ụgwọ otu nkwụsị. Anyị Asphalt shingle dị ka ngwaahịa ọzọ anyị mepụtara, ịgbakwunye otu nhọrọ ọzọ maka ndị ahịa karịsịa sitere na mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na South America, ebe anụ asphalt shingles bụ ndị a ma ama karịa iji.
FORSETRA kwenyere na iwulite ụlọ ahịa siri ike ma mara mma dị mkpa dị ka iwulite aha ọma anyị nwere. Ya mere, anyị na-ebute ngwaahịa kacha mma na China niile wee dị njikere ịkwụ ụgwọ dị elu ma lebara ya anya iji hụ na ngwaahịa anyị mezuru ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Anyi bu n’obi inye ndi ulo, ulo oru ulo, ndi na ere ihe nile na ndi nwere ulo na elu ulo nke di nma n’anya ma dozie iguzogide ihe ndi ahu.